စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ် ထွက်ရှိ “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ် ထွက်ရှိ “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“
စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ် ထွက်ရှိ
M-Media စာအုပ်စင်, ပြည်တွင်း သတင်း
မတ်လ ၄ ၊ ၂၀၁၃
စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ်အား ယနေ့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှစ၍ ဖြန့်ချီနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါစာအုပ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း၌ ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့သည့် “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်” အမည်ရသည့် စာအုပ်၌ ပါရှိသော အစ္စလာမ် သာသနာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သမိုင်းအမှားများကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းရေးသားထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျားနှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“ အမည်ရှိစာအုပ်ကို ဘဒ္ဒန္တ ကောသလ္လ (စံပြ ၊ ကမ္ဘာအေး) အမည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတစ်ပါး မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ့သမိုင်းကော်မရှင် မှ သမိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီးပါမောက္ခဦးထွန်းအောင်ချိန် အပါအဝင် ပညာရှင်ကြီး (၅) ဦးမှ ဖတ်ရှုတည်းဖြတ် ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ ၏ “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” မှာ တန်ဖိုး ၁၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး –
အမှတ်-၁၈၃၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း (အလယ်)
ဖုန်း ၀၁-၂၅၂၆၀၈၊ ၃၈၉၇၈၆
မှ ဖြန့်ချီနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“
၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ“ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“ လို့ အမည်ရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီစာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ရဲ့ဘွဲ့အမည်ကတော့ ဘဒ္ဒန္တ ကောသလ္လ (စံပြ ၊ ကမ္ဘာအေး) ပါ။ ဆရာတော်ကတော့ အဲဒီစာအုပ်ကို သမိုင်း စာအုပ် လို့ဆိုထားပါတယ်။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာကို “သမိုင်းရေးတာ မအအောင်လို့ပါ” လို့ရေးထားပြီး သမိုင်းစာအုပ်ကြီး ဖြစ်ကြောင်းဖော်ကျူးထားပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ကိုအစအဆုံးသေချာအနုလုံပဋိလုံဖတ်ကြည့်ပြီး နောက်အလွန် ကိုဝမ်းနည်းခြင်းသာမက၊ အံ့ဩခြင်းကြီးစွာလည်း ဖြစ်မိပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ခံစားရလဲ လို့ဝန်ခံရရင်ဖြင့်……. စာရေးသူ ဆရာတော်ဟာ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦး မဟုတ်တဲ့ (သမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်ဟု သာ ယူဆမိပါသည်။) အတွက် သမိုင်း ကြောင်းတွေကိုနားမလည်တာ၊ အလွဲအမှားတွေရေးတာဟာမထူးဆန်းလှ ပေမဲ့၊ ဆရာတော်ရဲ့စာမူကို တည်းဖြတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဖြင့် ခေတ် ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့အပြင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဟာ ကျွန်တော် အထင်ကြီးလေးစားမိခ့တဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးထွန်းအောင်ချိန်(အငြိမ်းစား သမိုင်းပါမောက္ခ) (စာအုပ်အမှာစာမှာတော့ ဦးအောင်ထွန်းချိန်လို့ မှားရေးထားပါတယ်။) ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
အဲဒီ သမိုင်းစာအုပ် ဆိုတဲ့ စာအုပ် အမှာစာစာမျက်နှာ (ဋ) မှာ စာရေးသူဟာ အဲဒီစာအုပ်စာမူကို ဖတ်ရှုတည်း ဖြတ်ပေးခ့တဲ့ဲ
ဆရာကြီးများ ရဲ့ အမည်တွေကို ဖော်ပြပြီး အထူးကျေးဇူး တင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အဲဒီ အမည်စာရင်းပါ ဆရာကြီးများရဲ့ အမည်တွေကိုကူးယူဖော်ပြပေးချင် ပါတယ်။
၁။ ယုဒဿန်ရိပ်သာ ဒုတိယကျောင်းအုပ် ဦးကျော်ညွန့်
၂။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း (Shalom Foundation) ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ ဇဘဲဂျွန်
၃။ ကရင်ခရစ်ယျာန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ ဒေါက်တာဂေဘယ်လ်
၄။ ပညာတန်ဆောင်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအငြိမ်းစားအထက်တန်းကျောင်း အုပ်ဆရာကြီး ဦးကျော်စိုး (မောင်ကျေးဇူး)၊
၅။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (အငြိမ်းစား သမိုင်းပါမောက္ခ) ဆရာကြီး ဦးထွန်းအောင်ချိန်
အဲဒီလိုခေတ်ပညာတတ်လူကြီးလူကောင်းဆရာကြီးများနဲ့ခရစ်ယျာန်အဖွဲ့အစည်းတွေက လေးစားအပ်တဲ့ပညာရှင်များကိုယ်တိုင်ကစာမူကိုဖတ်ရှုတည်းဖြတ် ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ အဲဒီစာအုပ်ပါ သမိုင်း အကြောင်းအရာ အတော်များများဟာ အလွဲကြီး လွဲနေကြောင်းသိလိုက်ရတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို အံ့အားသင့်ဝမ်းနည်းမိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး၊သို့သော်သမိုင်းပညာရပ်နဲ့ပညာရှင်တွေကိုချစ်ခင်ပါတယ်၊ လေးစားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမိုင်းပညာရပ်ကို အလွတ်တမ်းလေ့လာလိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေးစားရတြဲ့မန်မာနိုင်ငံက သမိုင်းပညာရှင်ကြီးတွေထဲက ပညာရှင်ကြီးအချို့ရဲ့ အမည် တွေကိုရွတ်ပြရရင်ဖြင့်…..
၁။ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း
၂။ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဘရှင်
၃။ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်ချိန်
၄။ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း
၅။ သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်
စာရေးသူနဲ့တကွ ဖတ်ရှုတည်းဖြတ်ပေးသော ဆရာကြီးများကို ကျွန်တော် အလွန်လေးစားပါတယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်တော်သမိုင်း အပေါ် သစ္စာ တည်ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရှေ့ မှာအလွဲသမိုင်း တင်ပြတာကို ငြိမ်နေဖို့ရာမရဲပါဘူး။ ငြိမ်နေလိုက်ရင်တော့ သမိုင်းကိုသစ္စာဖောက်တ့၊ဲ မတည်ကြည် မဖြောင့်မတ်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဘဲလို့ခံယူထားပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်မျိုးရောက်မှာကိုတော့အလန်ွရံွေ ကြာက်ပါတယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဒေသ တစ်ခု၊ ဘာသာအယူဝါဒ တစ်ခု ကိုချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မုန်းသည်ဖြစ်စေ၊ သမိုင်းကိုတော့ စိတ်ဆောင်ရာလိုက်ပြီးအလွဲအမှားရေးဖို့၊ လက်ခံလိုက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အလွဲအမှားတွေကိုသိသိကြီးနဲ့ အမှန်ပြင်မပေးမိရင်နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်တွေအပေါ် ကြီးမားစွာလွန်ကျူးခြင်းဘဲဖြစ်မယ် ဆိုတာ ဖြောင့်မတ်တဲ့လူသားတိုင်းသဘောတူမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Thamine Hu The
This entry was posted on March 4, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ မိမိနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော	ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရဦးဆောင်မှု လိုအပ် →